ဥရောပနှင့်ရထားအားဖြင့်ရှိပါတယ်ရယူခြင်းခုနှစ်တွင်ထိပ်တန်းယောဂဆုတ်ခွာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပ၌ယောဂ > ဥရောပနှင့်ရထားအားဖြင့်ရှိပါတယ်ရယူခြင်းခုနှစ်တွင်ထိပ်တန်းယောဂဆုတ်ခွာ
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား, ဥရောပ၌ယောဂ
သင်တို့အဘို့အဥရောပမှာထိပ်တန်းယောဂဆုတ်ခွာဖို့မှလွတ်မြောက်ရန်ရှာနေခဲ့လျှင် သင်၏နောက်အားလပ်ရက်, သငျသညျကံရောက်နေ. ကယောဂနှင့်အပန်းဖြေရန်ကြွလာသောအခါအလှဆုံးဥရောပနိုင်ငံတွေထဲကတချို့ဟာကမ်းလှမ်းရန်ပဒေသာများ. အိန္ဒိယကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးယောဂရာအရပ်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်သော်လည်း, ဥရောပတိုက်သားအမှန်ပင်အလေ့အထကိုတက်ယူကြပြီနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြောင့်နှုတ်ဆက်ပြီးပါပြီ. ဤတွင်ဥရောပမှာရှိတဲ့ထိပ်တန်းယောဂဆုတ်ခွာတချို့ရှိနေပါတယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့ရှိရတဲ့၏နည်းလမ်းများ ရထားနဲ့:
လှသောအဆင်း, ငြိမ်သက်ရှုခင်းဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့ယောဂအလေ့အကျင့်ခြီးမွှောနိုင်သည် - စင်ကြယ်သောလေနှင့်နေရောင်ခြည်ဖော်ပြခြင်းမ. သောသင်ရှာနေတာရဲ့ဆိုပါက, ထို့နောက်အီတလီသင်တို့အဘို့ရာအရပ်ကိုင်. ကနေကောက်ဖို့အားလုံးကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ယောဂဆုတ်ခွာနေနေရာများ, ကျနော်တို့အတွက်သူတို့အားမျက်နှာသာ Tuscany. သင်တစ်ဦးကိုယူနိုင်ခြင်း သာယာလှပရထားစီးနင်း ဒေသတွင်းမှတစ်ဆင့်နှင့် Chianti အတွက်ယောဂဆုတ်ခွာနေပေါ်ခရီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်. ခံစားခြင်းနေရောင်ခြည်, အောက်မေ့ခြင်းနှင့်ပစ္စုပ္ပန်စပျစ်ရည်နှင့်တည်းခို - ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဘယျသို့?
မီလန် Chianti Castellina မှရထား
Florence Chianti Castellina မှရထား
Perugia Castellina Chianti မှရထား
ရောမမြို့ Chianti Castellina မှရထား
ယင်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌သင်တို့တွင်သူတို့အဘို့ တောင်များ, ပြင်သစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းသင်လက်လွတ်မနိုင်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သွားကြသည်. ပုံမှန်ယောဂထက်အခြား, တွင် ပြင်သစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း, သငျသညျမတတျနိုငျယောဂဆုတ်ခွာ တောင်တက်, ယောဂ, အဖြူရောင်ရေအပျော်ဖောင်စီးခြင်း, ပင် paragliding. Annecy ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်ကြီးမြတ်မြို့ဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သထံမှရထားဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ပဲရစ်. ဒါဟာဆက်ဆက်တစ်ဦးထက်ပိုတက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံကိုပိုနှစ်သက်သူကိုလူများအတွက်ကိုက်ညီတစ်ဦးစွန့်စားမှုရဲ့.
ပဲရစ် Annecy ရထားမှ
ဂျီနီဗာ Annecy မှရထား
ဗြိတိန်နိုင်ငံသာယာလှပအများကြီးရှိပါတယ်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ မှဆုတ်ခွာပေးရန်သောနေရာများ, Glastonbury နဲ့တူ, Devon, Kent, စကော့တလန်, နှင့်အခြားသူများ. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့နေဆဲပိုနှစ်သက် လန်ဒန် ၎င်း၏ထူးခြားသောစိတ်ဝိညာဉ်သည်နှင့်လေထုများအတွက်. သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောမြို့ပြယောဂဆုတ်ခွာနေရှာနေခဲ့လျှင် အတှေ့အကွုံ, ထိုအခါ လန်ဒန်ရဲ့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှု. ရွေးချယ်မှုများအရေအတွက်သည်သင်၏ခေါင်းကိုလှည့်ဖျားစေမည် - တိုင်းယောဂအရသာအဘို့အရာတစ်ခုခုရှိမယ့်. သင်အလွယ်တကူဥရောပမှာအများဆုံးအဓိကမြို့ကြီးများကနေရထားအားဖြင့်ထိုမြို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အခြားဆုကြေးငွေင်.
ဂျာမနီ အလေးအနက်ထားင်း၏ကျန်းမာကြာနှင့်များသောအားဖြင့်အပြည့်အဝ spa အတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်ယောဂအလေ့အကျင့်ကိုပေါင်းစပ်. သင်သည်သင်၏ဘက်ထရီအားသွင်းဖို့လိုတဲ့အခါဒါဟာအားလပ်ရက်များအတွက်စံပြင် အဆိုပါ hectic လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဝေးခြေလှမ်း. ဂျာမဏီပင်လုံးဝတိတ်ဆိတ်ဆုတ်ခွာကမ်းလှမ်း, သတိသမ္ဘာဝနာအလေ့အကျင့်နှင့်အချို့သောအကြီးအ spa ကုသမှုတွေအများကြီးနှင့်အတူ. သဘာဝတရား၏တိတ်ဆိတ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်ဖိစီးမှုပျောက်ဆေးကြောဖို့ခွင့်ပြုအပန်းဖြေများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စာရွက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသူသည်သင်တို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ခုခုနဲ့တူအသံပါလျှင်, သင် Bavarian အဘိဓါန်မှရထားစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် အဲလ်ပ်တောင်တန်း.
သြစတြီးယား ယင်း၏ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလယောဂဆုတ်ခွာချစ်သောသူ, အရာကတစ်ဦးကို ပြီးပြည့်စုံသောလိုရာခရီး နှစ်စဉ်ဒီအချိန်အတွင်းမှာ. အဘယ်ကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားမဟုတ် ရာသီ ယင်း၏ဘုန်းအသရေပေါင်း? သငျသညျဆောငျးရာသီမုန်းရင်တောင်, သငျသညျသြစတြီးယားအတွက်ယောဂဆုတ်ခွာကလာပါစေဘယ်လိုတန်ဖိုးထားမှခညျြနှောငျနေ. သူတို့ဟာအအေးယူ ရာသီဥတု နှင့်ကျန်းမာရေး-မြှင့်တင်ယန္တရားထဲသို့လှည့်, ယောဂ၏အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များထည့်သွင်း, ဘာ့ဂ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းသော အိပ် သင့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကမြှင့်တင်ရန်. Salzburg သင်ဤတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်ရှိရာသြစတြီးယားမြို့ကြီးများ၏တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သမီးရထားဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်.
ပရာ့ဂ် Salzburg မှရထား
ဥရောပမှာရှိတဲ့ထိပ်တန်းနေရာများထဲကတစ်ခု၌သင်တို့၏အိပ်မက်ယောဂထွက်ပြေးဖို့အဘို့အဆင်သင့်? သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ ဥရောပမှာရှိတဲ့ထိပ်တန်းယောဂဆုတ်ခွာတဦးအဘို့အအစောပိုင်းထိုင်ခုံပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအပေးအယူများအတွက်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/yoga-retreats-europe-train/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml သင် / pl မှ / က de သို့မဟုတ် / ru ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
#သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း #peacefulness #relaxation #ယောဂ europetravel ရထားခရီးသွား